नजरमा ठाडै देखिएको अत्यास लाग्ने उकालो र सैलुङ
यात्रा एक दृश्य अनेक
“सैलुङ” सँग तामाङ पहिचानको ऐतिहासिक विम्ब लुकेको छ । दोलखा र रामेछाप जिल्लाको सीमानामा अवस्थित सैलुङ समुन्द्र सतहदेखि ३१४५ मिटरको उचार्इमा रहेको छ । ऐतिहासिक, धार्मिक र साँस्कृतिक रुपले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने यो पर्वत पछिल्लो समय पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ । बौद्ध,हिन्दू र बोन धर्मवालम्बीहरुको आस्थाका केन्द्रको रुपमा परिचित सैलुङ पवित्र धार्मिक स्थल पनि हो । सैलुङ डाँडा प्रकृतिले सुन्दर स्थलको रूपमा मात्र नभएर धार्मिक स्थलको रूपमा पनि परिचित छ, जहाँ गोने ङह्या अर्थात् जनै पूर्णिमा, बालाचतुर्दशी र बारबर्षे गोदावरी मेला जस्ता चाडपर्वमा धेरै दर्शनार्थीहरूको भीड लाग्ने गर्दछ।
सैलुङमा प्रत्येक बर्ष गोने ङह्याको २ दिन अगावै ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ । जसलार्इ गोने ङ्या मेला अर्थात शैलुङ जात्रा नामले परिचित छन् । मेलाको आफ्नै छुट्टै महत्व रहेको छ । मेलाको दिन दिवंगत पितृहरुको सम्झनामा मोलमपाठ, पूजा (ङोवा) गर्ने गरिन्छ । त्यसका लागि सैलुङ असपासका ठाउँहरूबाट श्रदालु भक्तजनहरु आउने गर्दछन् । गोने ङह्या झाँक्रीहरुको पर्व पनि भएकाले यहाँ मेलाको दिन झाँक्रीहरुको भीड नै लाग्ने गर्दछ ।
गोने ङ्या मेलाको लागि हामी चार भाइको (श्याम योञ्जन, खोजराज गोले, सन्तोष तामाङ र पेमा तामाङ मोक्तान) यात्रा सैलुङसम्म । एकाबिहानै आँखामा सैलुङ जात्रा अनि त्यहाँ कैद गर्ने दृश्यहरुको प्रतिविम्बित दृश्यहरु सोच्दै बसपार्कबाट यात्रा अगाडि बढायौं । झोलामा आवश्यक सामग्री र काँधमा क्यामेरा भिर्दै सैलुङश्वरी यातायातबाट गन्तब्यमा लम्कियौं ।
काठमाडौको गर्मीलाई छिचोल्दै हिमालको चिसो हावासंँग लुकामारी गर्दै हामी ढुङ्गे पुग्यौं । ढुङ्गेको पहिलो दिनको बसाईसँगै त्यहाँको खानाले साथीहरुको मुख जतिखेर पनि रसाइरहन्छ । आहा कति मिठो ? यस्तायस्तै शब्दहरुले बयान गर्दै सैलुङ मुखमै झुण्डिन थाल्यो । यो यात्रा हाम्रो दोस्रो पटक हो । दोस्रो पटक भएकाले खासै खुल्दुली रहेन तर रह्यो उकालो बाटोको अवस्था । नजरमा ठाडै देखिएको अत्यास लाग्ने उकालो र सैलुङ । तैपनि हातमा क्यामरा अनि बाटो भरिको फुलैफुल अनि विभिन्न जडिबुटीले भरिपूर्ण ठाउँमा हिड्दा साथीहरुले सैलुङमा पुगिसक्दा खाली कापीको पाना भरेर गीत, कविता तयार गरि सक्थे भने क्यामरा हातमा हुने साथीले फोटो कैद गरेर मेमोरी भराउथे । यात्रामा देखिएका अनेक दृश्यहरु कैद गर्न तल्लिन देखिन्थे साथीहरु । सैलुङ बसाइको पहिलो दिन चारै जनाले सैलुङ निकै राम्ररी नियाल्यौं ।
मेला भर्न सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, काभ्रेका विभिन्न गाउँबाट अघिल्लो दिन नै डाँडा नजिकका होटेलहरु भरिसकेका थिए । करिब २० देखि २५ होटलहरु लगायतका वरिपरिका आफन्तका घरहरु २ दिनका लागि भरिभराउ थिए । होटल व्यवसायीहरु व्यापारमा आतुर देखिन्थे । बाटोमा व्यापारीहरु व्यापरको लागि भारी बोकेर मेलामा ब्यापार गर्न तम्सेको हामी सजिलै देखिन्थे भने जात्रारेहरु मेला भर्न तछाडमछाड गर्दै उकालो चढेको प्रशस्तै पाउथ्यो । हामी मेलामा देखिएका अनेकै लोभ लाग्दा दृष्यलाई विभिन्न कोणबाट क्यामरामा कैद गर्न आ–आफ्नै शुरमा थियौं ।
चारै भाई छुट्टाछुट्टै जिम्मेवारीका साथ मेला चहार्दै व्यस्तता हुन्थ्यैं । झाँक्री, लामा, अनि जात्रामा गाउने गीत, त्यहाँका पहिचानको बाटो खोताल्ने । यसैमा अडिग भएर अघि बढी रह्यौं ।
ब्यापारीहरु थरीथरीका देखियो । आर्गनिकदेखि देशी बजारको ब्यापार गर्ने सम्म । सायद मेलाको रौनकताले होला हामीलाई भोक लागेको र समय वितेको पत्तै पाएनौं । मौसमले पनि मेलालाई नियालिरहेका भान हुन्थ्यो । कहिले कुहिरोले डाँडालाई बेहुली झै सिगारिन्थे भने कहिले खुल्ला आकाश झै खुलेर मनै प्रफुल्लित पार्थे । तर कतिलाई त थकान पनि नमर्दो हो । बसिराहुँ भए नि के गर्नु, यस्तैमा भलाकुसारी गर्दै समयले नेटो काटेपछि सबैजना आ-आफनै बाटोमा पाइला अघि सर्दै बिदा भए । इष्टमित्र, आफन्तसँगको भेटघाटपछि सबैजना छुटिन बाध्य भए ।
दिनभरको थकानपछि बेलुकाको बसाईमा हामी पुनः ढुङ्गे पुग्यौं । ढुङ्गे बसाइमा दिनभरीको दृश्यलाई थकान बिसाउदै क्यामरामा भएको दृश्य नियाल्यौ । अनि अनेक थरिका दृश्यहरु माथि परिकल्पना गर्दै थकान मारौं । यसरी हामीले सैलुङ यात्रा र मेला सफल पार्यौं ।
बेचिए सेर्कु, थामिएन अाँशु
बौद्धको गाईजात्रा (भिडियो/फोटोफिचर)
कालिञ्चोकमा दशैमा केवलकार सररर (भिडियो)
शनिबार म्हेन्दोमायामय बने नाचघर
सात जना तामाङ सम्मानित
इचंगु तामाङ सेवा समाज, स्वयम्भुले तामाङ समुदायबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेकालाई सम्मान ...
घेदुङको राप्तीमा वडा नं. ५ कमिटि गठन
पूर्वि चितवन राप्ती नगरपालिका वडा नं ५ मा दुर्ग तामाङको अध्यक्षतामा नेपाल ...
बौद्ध धर्मअनुसारको माने, चौतारा लोप हुँदै
बौद्ध धर्मअनुसारको लहरे माने, माने, चौतारा, छ्योर्तेन, बौद्ध र मणि ढुङ्गा लोप हुँदै गएको ...
तामाङ पत्रकार संघ चितवनमा ४ सदस्य मनोनित
तामाङ पत्रकार संघ चितवनको विशेष बैठकले ४ जना सदस्य मनोनित गरेको छ ...
चेपाङ संघ राप्तीको ७ नं. वडा कमिटी गठन
राप्ती नगरपालिका ७ चितवनमा नेपाल चेपाङ संघको ५ सदस्यीय कमिटी गठन भएको ...
तामाङ कलाकारहरू सम्मानित
२३ औं तामाङ चलचित्र प्रदर्शन दिवसमा ९ जना तामाङ कलाकार सम्मानित भएका ...